FBC - Pirimiyar Liigii: Bunni Itiyoophiyaa Magaalaa Finfinnee waliin taphata
Pirimiyar Liigii: Bunni Itiyoophiyaa Magaalaa Finfinnee waliin taphata
Finfinnee, Caamsaa 09, 2009 (FBC) Pirimiyar Liigiin Itiyoophiyaa torban 28ffaa har’aa fi bor itti fufee geggeeffama.
Kanaanis har’a sa’a 10 irratti Bunni Itiyoophiyaa garee Magaalaa Finfinnee waliin taphata.
Qabxii 44n sadarkaa 4ffaarra kan jiru Bunni Itiyoophiyaa dhuma liigichaa irra kan jiru Magaalaa Finfinnee waliin taphatee kan injifatu yoo ta’e Buna Sidaamaa waliin gooliin caalee qabxii 47n qixa sadarkaa 3ffaa irra taa’a ( Bunni Sidaamaa hanga taphatutti).
Guyyaa boriis liigichi itti-fufee taphoonni torba sa’aatii wal-fakkaataa 9 irratti nigeggeffamu.
Haala kanaan dursaan liigichaa Qiddus Giyoorgis Isteediyamii Finfinnee irratti Itiyoo Elektirika waliin morkata. Shaampiyanii Liigichaa ta’uuf qabxiiwwan afur qofa sassaabuu kan irraa eegamu Qiddus Giyoorgis tapha inni Itiyoo Elektirika waliin taphatu kan eegamudha.
Walaayittaa Diichaa Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa waliin, Magaalaan Faasil Ittisa waliin, Waldiyaan Jimmaa Abbaa Bunaa waliin, Bunni Sidaamaa Magaalaa Arbaaminc waliin, Magaalaan Adaamaa Dadabiit waliin akkasumas Magaalaan Dirree Dawaa Magaalaa Hawaasaa waliin nitaphatu.
Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa taphoota Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 28ffaa Caamsaa 4 geggeffamuuf turan Caamsaa 10, 2009 akka darbuuf murteessuunsaa kan yaadatamudha.
Chaampiyans Liigii Afriikaa Qiddus Giyoorgis tapha ramaddii jalqabaa Kilaba Afriikaa Kibbaa Maamilodoo Sandaaws waliin taphachuunsaa akkasumas kilaboota gidduutti pirimiyar liigii irraa akka hin-buuneef wayita wal-morkatan ta’e jedhee qabxii gadhiisuun waan mul’ateef sagantichi Caamsaa 10tti dabarfamuusaa federeeshinichi beeksisuunsaa hin-dagatamu.
Pirimiyar Liigicha Qiddus Giyoorgis qabxii 52n wayita dursu, Dadabiit qabxii 48n, Bunni Sidaamaa qabxii 47n, Bunni Itiyoophiyaa fi Magaalaan Adaamaa qabxii 44n sadarkaa hanga shanaffaa jiru qabataniiru.
Magaalaan Dirree Dawaa qabxii 28n, Baankiin Daldalaa Itiyoophiyaa 25n akkasumas Magaalaan Finfinnee qabxii 20n sadarkaa dhumaarra jiru.
Goolii baay’ee galchuun ammoo Geetaanaa kabbadaa goolota 21 dursa; Saaladdiin Sayid qabxii 15, Jaakoo Arafaat qabxii 12n, Fitsum Gabramaariyaam fi Adaanaa Girmaa qabxii wal-qixa 11n itti-aanu.
Oduuwwan Biroo « Shaampiyoonaan atleetiiksii riikardiin eegalame	Taphoonni Ispoortii biyyaalessaa sadarkaa isaanii kan eeggatan waan hin-ta’iniif ispoortesssitoota bakka bu’an horachuun hin-danda’amne »